Mpamatsy vola - Shineon Technology Co., Ltd.
GSR Ventures dia famatsiam-bola ho an'ny renivohitra izay manangom-bola voalohany amin'ny orinasam-pandrosoana teknolojia am-piandohana sy mitombo misy asa lehibe ao Shina. Ny GSR amin'izao fotoana izao dia eo amin'ny $ 1 lavitrisa eo ambany fitantanana, ny faritra ifantohany voalohany dia misy semiconductor, Internet, tsy misy tariby, haino aman-jery vaovao ary teknolojia maitso.
Northern Light Venture Capital (NLVC) dia orinasam-pandraharahana mifantoka amin'i Shina izay mikendry ny fotoana voalohany sy fitomboana. Ny NLVC dia mitantana vola mitentina 1 tapitrisa dolara amerikana miaraka amin'ny vola 3 US $ ary vola 3 RMB. Ny orinasan-tseraserany dia misy ny TMT, ny teknolojia madio, ny fitsaboana, ny fanamboarana mandroso, ny mpanjifa sns.
IDG Capital Partners dia mifantoka indrindra amin'ny fampiasam-bola amin'ny tetikasa VC & PE mifandraika amin'i Shina. Izahay dia mifantoka indrindra amin'ny orinasa mitarika amin'ny vokatra mpanjifa, serivisy fanaovana franchise, Internet ary fampiharana tsy misy tariby, haino aman-jery vaovao, fanabeazana, fitsaboana, angovo vaovao, ary sehatry ny famokarana mandroso. Manam-bola amin'ny dingana rehetra amin'ny androm-piainan'ny orinasa izahay hatramin'ny dingana voalohany ka hatramin'ny IPO. Ny fampiasam-bolanay dia manomboka amin'ny US $ 1M ka hatramin'ny $ 100M.
Mayfield Found dia iray amin'ireo orinasa mpamatsy vola manerantany, Mayfield dia mitentina 2,7 miliara dolara eo ambany fitantanana, ary mihoatra ny 42 taona ny tantara. Nanambola tamin'ny orinasa maherin'ny 500 izy, ary nanjary nihoatra ny 100 IPO ary mihoatra ny 100 ny fitambarana sy ny fahazoana. Ny sehatr'asa famatsiam-bola lehibe dia anisany Enterprise, Consumer, Energy Tech, Telecom ary Semiconductors.